जहाज बेलैमा नउडाउदा १ सय ७० यात्रु वाइडबडी विमानभित्रै बस्न बाध्य ! – Rastriyapatrika
जहाज बेलैमा नउडाउदा १ सय ७० यात्रु वाइडबडी विमानभित्रै बस्न बाध्य !
काठमाडौं । २ सय ७४ यात्रु बोकेर मंगलबार राति दुबई उड्नुपर्ने नेपाल वायुसेवा निगमको विमान व्यवस्थापकीय लापरबाहीका कारण ११ घण्टापछि बुधबार बिहानमात्रै उड्यो । जहाज बेलैमा नउडाउदा १ सय ५० बढी यात्रु ८ घण्टासम्म पार्किङवेमा राखिएको विमानभित्रै बस्न बाध्य भए ।
वाइडबडी विमानको उडान समय सवा ९ बजे थियो तर, १० बजेसम्म पनि उड्न नसकेपछि एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर उड्न नमिल्ने भन्दै अनुमति दिएनन् । तर एयरलाइन्सका कर्मचारीले भने क्याप्टेनले जहाजमा प्यासेन्जर बोर्ड भइसकेको र केवल चार मिनेटमात्र थप गरिदिन गरेको आग्रह विमानस्थलका एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर नमानेको बताउछन् ।
विमानस्थलका अधिकारीहरु भने चैत १८ गते विमानस्थल सुधारको निर्माण कार्य सुरु भइसकेकाले राति १० देखि विमान ८ बजेसम्म विमान उडाउन र अवतरणमा रोक लगाइएको छ । यस्का लागि तीन महिनाअघि सूचना जारी गरिएको थियो । यसरी सुचना जारी गर्दा पनि उडान अनुमति माग्नु अन्तराष्ट्रिय कानुन उल्लंघन गर्नु मानिन्छ ।
बुधवार राति निगमका दुई ओटा वाइडबडी विमान दुबई र दोहका लागि करीब एकै समयमा उड्दै थिए । त्यसक्रममा दुवई जाने यात्रुहरु दोहा जाने विमान र दोहा जाने यात्रुरु दुबई जाने विमानमा चढेपछि समस्या उत्पन्न भएको विमानस्थलका कर्मचारी बताउछन् ।
यो घटनाको बिषयमा छानविन गर्न पर्यटन मन्त्रालयले सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ ।